एमाले नेता कार्यकर्ता निरास पार्दै बालकोटबाट आयो दुःखद खवर, ओलीलाई एक्कासी फेरी के भयो ? — Sanchar Kendra
एमाले नेता कार्यकर्ता निरास पार्दै बालकोटबाट आयो दुःखद खवर, ओलीलाई एक्कासी फेरी के भयो ?
काठमाडौ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरी विरामी परेका छन् । उनको घरमै उपचार भइरहेको छ । ओली हिजो आफ्नै कार्यक्रममा अकस्मात बिरामी परेका हुन् ।
अस्वस्थ भएपछि विधान महाधिवेशनबाट बाहिरिएका ओलीलाई लगातार खोकी लागेको छ ।ओलीको रत्तसंचार पनि अनियमित भएको बालकोट श्रोतको भनाई छ । उनलाई चिकित्सले अस्पताल भर्ना गर्न सल्लाह दिएको भएपनि ओलीले मानेका छैनन् ।
‘सामान्य रुघाखोकी हो, केही समयमा निको हुन्छ’ भन्दै ओली टारिरहेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिरहेको बेला आकस्मात स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिरहेकै बेला रुघाखोकी लागेपछि ओली हलबाट बाहिरिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनी त्यहाबाट सिधैं निजीनिवास बालकोट पुगेर आराम गरिरहेका छन् ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अस्पताल भर्ना आज ४ दिन भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्रि.वि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका नेपालको स्वास्थ्य अवस्था स्थीर छ । उनी अतिकति बोल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।